ရှညောသား: February 2014
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, February 25, 20140comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, February 22, 20140comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, February 19, 2014 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, February 18, 20140comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
တိုင်းလည်းကျောက်ပန်းတောင်းမှာမကပ်နိုင်ပါဘူး။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆိုင်းပညာမင်းသမီးပညာကောင်းကောင်းတတ်ကျွမ်းပါမှပွဲငှားသူ ရှိတာမို့တော်ယုံကတတ်တာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ဆိုင်းကောင်းမင်းသမီးကောင်းနဲ့ယဉ်ပါးနေတဲ့တောသူတောင်သားပရိတ်သတ်က လည်းဆိုင်းဝိုင်းဆိုအလှူအိမ်ရောက်လို့ဗြောခေါက်ကတည်းကအခြေအနေကိုခန့်မှန်းနိုင်သလိုမင်းသမီးဆိုလည်းယိုးဒယားကစပြီက
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, February 06, 20140comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, February 04, 20140comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook